Mpitsidika 484,071 no tonga an-tsambo nankany Hawaii tamin'ny aprily 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Mpitsidika 484,071 no tonga an-tsambo nankany Hawaii tamin'ny aprily 2021
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Talohan'ny areti-mandringana, Hawaii dia niaina fandaniam-bola sy fahatongavan'ireo mpitsidika marobe tamin'ny taona 2019 sy tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny 2020.
Mpitsidika 4,564 fotsiny no nankany Hawaii tamin'ny Aprily 2020
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika tamin'ny volana aprily 2021 dia nidina 43.0 isan-jato tamin'ny fanisana tamin'ny volana aprily 2019
Ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika dia nidina 38.4 isan-jato tamin'ny $ 1.32 miliara nolaniana tamin'ny volana aprily 2019
Raha ny statistika savaranonando navoakan'ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii (HTA), totalin'ny mpitsidika 484,071 tonga tamin'ny serivisy an'habakabaka tamin'ny Nosy Hawaii tamin'ny volana aprily 2021, raha tsy 4,564 fotsiny ny mpitsidika izay nankany Hawaii tamin'ny aprily 2020 rehefa nitsahatra ny fizahan-tany tany amin'ireo nosy noho ny areti-mandringana COVID-19 manerantany. Ny vola lany amin'ny mpitsidika tonga tamin'ny volana aprily 2021 dia $ 811.4 tapitrisa.
Talohan'ny areti-mandringana dia nahitana fandaniam-bola sy fahatongavan'ireo mpitsidika avo lenta ny Hawaii tamin'ny taona 2019 sy tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny taona 2020. Raha ampitahaina amin'ny taona 2019, ny fahatongavan'ireo mpitsidika tamin'ny aprily 2021 dia nilatsaka 43.0 isan-jato tamin'ny fanisana 2019 849,397 tamin'ny volana aprily 38.4 (rivotra sy cruise), ary ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika dia nidina 1.32 isan-jato tamin'ny $ 2019 miliara laniny tamin'ny aprily XNUMX.
Ny volana aprily 2020 no iray volana feno fameperana ny dia mba hitandroana ny fiarahamonina soa aman-tsara, taorian'ny fananana karamaina mandalo 14 andro an'ny State of Hawaii ho an'ny mpandeha rehetra (nanomboka ny 26 martsa 2020). Nandritra io fotoana io, ny fanavahana dia misy ny fitsangatsanganana noho ny antony lehibe toy ny asa na fitsaboana ara-pahasalamana. Ny kaontinanta efatra an'ny fanjakana dia nampihatra ny didiana sy ny ora tsy azo ihodivirana ao an-trano amin'ny volana aprily. Saika nofoanana avokoa ny sidina trans-Pasifika sy ny sidina interisland. Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina (CDC) dia nampihatra «No Order Sail» amin'ny sambo fitsangantsanganana rehetra. Tamin'ny 15 Oktobra 2020, natolotry ny Fanjakana ny programa Safe Travels, izay namela ireo mpandeha avy any Pasifika handingana ny quarantine raha toa ka nanana fitsapana ratsy teo amin'ny COVID-19 izy ireo.
Herintaona taty aoriana tamin'ny volana aprily 2021, dia mbola eo am-panatanterahana ny programa Safe Travels, miaraka amin'ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana sy mandalo faritany afaka mandingana ny quarantine 10 andro tsy maintsy ataon'ny fanjakana miaraka amin'ny COVID-19 NAAT ratsy ratsy. valin'ny fitsapana avy amin'ny mpiara-miasa amin'ny fitiliana azo antoka talohan'ny niaingany. Ny County County Kauai dia niditra indray tamin'ny programa Safe Travels tamin'ny 5 aprily 2021. Ny distrikan'i Hawaii, Maui ary Kalawao (Moloka'i) koa dia nanana quarantine ampahany tamin'ny aprily. Ny CDC dia nanohy nihena ny fameperana tamin'ny alàlan'ny "Conditional Sail Order" amin'ny sambo fitsangantsanganana rehetra.
Tamin'ny volana aprily 2021, mpitsidika 352,147 (mifanohitra amin'ny mpitsidika 3,016 tamin'ny volana aprily 2020) no tonga avy tany Etazonia Andrefana ary mpitsidika 119,189 (mifanohitra amin'ny 1,229 tamin'ny volana aprily 2020) dia avy tany Atsinanana Etazonia. Ho fanampin'izay, mpitsidika 1,367 13 (mifanohitra amin'ny mpitsidika 2020 tamin'ny volana aprily 527) no tonga avy any Japon ary mpitsidika 2020 (mifanohitra amin'ny mpitsidika sivy amin'ny volana aprily 10,842) dia avy any Canada. Nisy mpitsidika 298 (mifanohitra amin'ny 2020 tamin'ny aprily XNUMX) avy amin'ny tsena iraisam-pirenena hafa. Ny ankamaroan'ireo mpitsidika ireo dia avy any Guam, ary mpitsidika vitsivitsy vitsivitsy dia avy any Asia hafa, Eropa, Amerika Latina, Oceania, Filipina ary nosy Pasifika.
Nandany 573.2 tapitrisa $ ny mpitsidika amerikana. Nandany vola 233.7 tapitrisa dolara ny mpitsidika avy any Etazonia. Nandany 4.5 tapitrisa dolara ny mpitsidika avy any Japon. Tsy nisy ny angona fandaniana mpitsidika avy amin'ny tsena hafa.
Sidina Trans-Pasifika miisa 3,614 no nanompo ny Nosy Hawaii tamin'ny volana aprily raha ampitahaina amin'ny sidina 426 herintaona lasa izay. Io dia nisolo toerana 727,980 ny habakabaka, hatramin'ny 95,985 ny seza. Betsaka ny seza voalamina avy any Etazonia Andrefana (623,611, + 703.7%) sy Etazonia Atsinanana (80,172, + 3,646.4%). Serivisy an'habakabaka avy any Japon (seza 8,798 1,082.5, + 2,224%), Azia hafa (seza 920.2, + 716%) ary Kanada (seza 2020, tsy nisy tamin'ny volana aprily 8,589) no tavela fa nisy seza efa voalahatra kokoa raha oharina tamin'ny herintaona lasa izay. Tsy nisy tohiny na serivisy mivantana avy any Oceania. Ny seza voalahatra avy any amin'ny firenen-kafa (Guam, Manila, Majuro) dia nihena (10.4 XNUMX, -XNUMX%).
Nitaky ny hampitsaharana ny herin'ny Boeing ireo niharam-boina ho...